Garab istaaga Dhalinyarada iyo Garow-shiyaha Madaxweyne “Qoorqoor”!!!
Intiinii la socotay Saaxiibada aan bartan Jaalka ku nahay, waxaan soo qoray, qormo dhaliil ah oo ku saabsan Saami qeybsi aan ugu magacdaray “Saami qeybsiga Duurjoogta”, waxaana i soo gaartay farriimo Garab istaag ah oo iga soo gaartay dhalinyaro badan oo damiirkoodu noolyahay, kuwaasoo igu bogaadiyay qoraalka iyo habka asluubeysan ee aan u soo gudbiyay. Mana aheyn oo kaliya kuwa aan ehelka nahay ee waxay ka koobnaayeen Soomaaliweyn oo dhan.
Runtii aniga qormadeydu maaheyn mid aan ula jeeday in xaquuq ii gaar ah la I duudsiiyay, sidaasna aan kor ugu qeyliyay, balse waxay aheyd dhaqan Cadaalad darro ah oo in muddo ah ka dhex jiray dad walaalo ah, ehel ah, Xidid iyo Xasabo intaba isku ah, kaasoo markii dambe u ekaaday wax raalli lagu yahay.
Waxaa si gaar ah ii taabatay, falcelinta dhalinyaradaas oo dalka gudihiisa iyo dibeddiisaba igala soo xiriiray. Qaarkoodna ay si koox koox iyo si gaar ahba iila soo xiriireen iyaga oo ka damqaday Cadaalad darrida aan kor u sheegay, waxayna ila qireen in ay tahay wax laga xishoodo una baahan in laga dhiidhiyo.
Waxaa xusid mudan in qaarkood ay hormuud u noqdeen inay cod dheer ugu sheegaan waxgaradka iyo Cuqaasha ay sida gaarka ah u quseysay farriinteydu.
Ujeedada ugu weyn qoraalkeyga ayaa aheyd in la arko tabashada Isla markaana la cambaareeyo si ugu yaraan ay u noqoto wax laga xishoodo.
Waxaan halkan rabaa inaan si gaar ah uga mahadceliyo Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmad Cabdi Kaariye (Qoorqoor) oo Garowshiyo ka bixiyay tabashadaan Isla markaana cadeeyey in uusan raali ka aheyn Cadaalad darro maamulkiisa dhexdiisa lagu sameeyo. wuxuuna hoosta la xariiqay in hadda wixii ka dambeeya uu la dagaalami doono ku takrifalka awood qeybsiga, si guud iyo si gaar ahba.
Ugu dambeyntii waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada damiirkoodu Noolyahay ee arrinkan iska fogeeyey, waxaana rajeynayaa in laga gudbo hab-dhaqankaan abuuraya in dadka walaalaha ah ay isu calool xumaadaan ayna kala fogaadaan.
WQ:Garaad Salaad Xersi